Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xaqiijiyay inuu is karantiilay - Jowhar Somali Leader
Home Somali Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xaqiijiyay inuu is karantiilay
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xaqiijiyay inuu is karantiilay
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maalmihii la soo dhaafay warar kala duwan ka soo baxayeen xaaladiisa ayaa xaqiijiyay inuu xaalad karantiil is geliyay, si u taxadar ugu muujiyo cudurka Coronavirus.
Qoraal kooban oo uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu Madaxweyne Waare ku shaaciyay inuu is karantiilay, si uu dadka tusaale ugu noqdo, xaaladiisa ay wanaagsan tahay.
“Ilaaheey uunbaan xanuunsan. Laakiin waan fiicanahay. Waxaan doortay inaan is-karantiilo todobaadyadii u dambeeyay si aan taxaddar iyo tusaale ugu noqdo dadkayga. Waan sii wadi doonaa inaan sameeyo”ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Warar maalmihii la soo dhaafay ka soo baxayay magaalada Jowhar ayaa ahaa shaki laga qabo inuu ku fiday cudurka Coronavirus, kaddib markii uu u geeriyooday Xildhibaan Khaliif Muumin oo maalmo ka hor diyaarad looga soo qaaday magaalada Jowhar, kaddib markii laga helay Coronavirus.
Madaxweyne Waare ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa shaqsiyaad xiriir la sameeyay Wasiiru dowlihii Wasaaradda Cadaaladda Khaliif Muumin oo shalay u geeriyooday cudurka Coronavirus.
Cudurka Coronavirus ayaa si tartiib tartiib ugu fidayay bulshada dhexdeeda, waxaana 3 maalmood ee la soo dhaafay la xaqiijiyay in cudurkaas laga helay illaa 13 ruux oo shaqaale caafimaad ay ku jiraan.